သံဃာတော် အပါး ၁ ဝဝဝ တို့အား ဆွမ်းဆန်စိမ်း လောင်းလှူပွဲတွင် မပြည့်စုံမှု၊ မှားယွင်းမှုများ ရှိ - Yangon Media Group
သံဃာတော် အပါး ၁ ဝဝဝ တို့အား ဆွမ်းဆန်စိမ်း လောင်းလှူပွဲတွင် မပြည့်စုံမှု၊ မှားယွင်းမှုများ ရှိ
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၅
ရွှေတိဂုံ စေတီတော်မြတ်ကြီး ဗုဒ္ဓါဘိသေက အနေကဇာတင် မဟာမင်္ဂလာနှင့် သံဃာတော်အပါး ၁၈ဝဝဝတို့အား ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲ အောင် မြင်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဂိုဏ်း ပေါင်းစုံ သံဃာ့ဦးသျှောင်ဆရာတော်ကြီးများထံ မပြည့်စုံမှု၊ မှားယွင်းမှုများရှိပါက ခွင့်လွှတ်ရန်ဝန်ချတောင်းပန်ပွဲကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကိုယ်စား ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်က ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး ဗုဒ္ဓါဘိသေကအနေကဇာတင် မဟာမင်္ဂလာနှင့် သံဃာတော်အပါး၁၈ဝဝဝတို့အား ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၁ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ မသိနားမလည်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ သတိမသွင်းမေ့လျော့ ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း မပြည့်စုံမှု၊ မှားယွင်းချွတ်ချော်မှု၊ အဆင်မပြေ မှုများရှိခဲ့ပါကခွင့်လွှတ်သည်းခံ တော်မူရန်အတွက် ဝန်ချတောင်းပန်ပွဲကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကိုယ်စား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ဇန်နဝါရီ ၅ရက်တွင် ရွှေတိဂုံဘုရား အရှေ့ဘက်မုခ်ရှိ တိုင်းသံဃနာယက အဖွဲ့ကျောင်းတွင် ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှပါသော တစ်သက်မှာတစ်ခါ ကြုံရခဲဆုံရခဲ၊ တွေ့ ရခဲမြင်ရခဲ၊ ပြုရခဲ ဆောင်ရခဲ ဖြစ်သည့် မဟာမင်္ဂလာအခမ်းအနားကြီးကို ကျင်းပပူဇော် ဆောင်ရွက်ကြရာတွင် မသိနားမလည်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ သတိမသွင်းမေ့လျော့ ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း မပြည့်စုံမှု၊ မှားယွင်းချွတ်ချော်မှု၊ အဆင်မပြေမှုများရှိခဲ့ပါက မေတ္တာရှေ့သွား သည်း ခံစိတ်ထားတော်မူရန် တပည့်တော်များအပေါ် ခွင့်လွှတ်တော်မူကြပါ၊ သည်းခံတော်မူကြပါ၊ စောင့်ရှောက် တော်မူကြပါဟု ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကိုယ်စား ဘုရားတပည့်တော်မှ တောင်းပန်လျှောက်ထားအပ်ပါသည်”ဟု ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ဂိုဏ်းပေါင်းစုံသံဃာ့ဦးသျှောင်ဆရာတော်ကြီး များရှေ့မှောက်တွင် ဝန်ချတောင်း ပန်ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းကဲ့သို့ ဝန်ချတောင်းပန် ပြီးနောက် ဂိုဏ်းပေါင်းစုံဆရာတော်ကြီးများထံ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သံဃနာယကအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာ တော်ကဦးဆောင်၍ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်သံဃနာယကအဖွဲ့ သံဃာ တော်များ၊ အခမ်းအနားကျင်းပရေး ကော်မတီဝင်အသီးသီးနှင့် ဆပ်ကော် မတီဝင်များ/အလှူရှင်များ၊ ဝေယျာ ဝစ္စကုသိုလ်ရှင်များ(ကိုယ်စား) အ ပြစ်ရှိကခွင့်လွှတ်ပေးပါရန် သြကာသကန်တော့ချိုးဖြင့် ရှိခိုးကန်တော့ တောင်းပန်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ နိုင်ငံတော်သံဃနာယက အကျိုးတော်ဆောင်၊ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ သန်လျင်မင်းကျောင်းဆရာ တော်ကြီးက ”ဒီအခမ်းအနားကြီး ကျင်းပတာဟာ အင်မတန်ကြုံရခဲတဲ့ အခမ်းအနားကြီးဖြစ်သလို ဆောင်ရွက်ရတာလည်း အင်မတန်ခဲယဉ်းတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကြီး ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီလိုအခမ်းအနားကြီးကို ဒီ လောက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်တာကိုပဲ ဘုန်းကြီးတို့ အနေနဲ့ အင်မတန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်း သာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောက်များပြားတဲ့ သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်များ အတွက် ဆောင်ရွက်ရတာ အမှားအယွင်းချို့ယွင်းမှုက အနည်းနဲ့အများ တော့ရှိမှာမလွဲပါဘူး။ သို့သော်ငြား ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲကြီးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာ ချို့ ယွင်းမှုဆိုတာ အနည်းနဲ့အများရှိကြ စမြဲပါ။ တောင်းပန်လျှောက်ထားတယ်ဆိုတာ ရှေးသူတော်ကောင်းများလုပ် ခဲ့တဲ့ကိစ္စဖြစ်လို့ အင်မတန်ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာစွာဖြင့် ဒီလိုတောင်းပန်မှုကို ကျေနပ်စွာ လက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု သြဝါဒချီးမြှင့်မိန့်ကြားခဲ့သည်။
ကျပ်သိန်းပေါင်း ခုနစ်သောင်းကျော် ကို ရှင်းမပေးနိုင်သည့် ဘုရင့်နောင် ကုန်စည်ဒိုင်မှ ဆန်ကုန
ဟာသ သရုပ်ဆောင် သေဆုံးခဲ့မှု သံသယရှိသူ သုံးဦးကို ရုံးထုတ် ရမန်ယူ
မိတ္ထီလာ ခြေလျင်တောင်တက် အသင်းသားနှစ်ဦး ဖုန်ကန်ရာဇီ တောင်ထိပ်၌ အလံ စိုက်ထူနိုင်ခဲ့ပြီး တေ??
သိန်းနီမြို့ သုသာန်ဟောင်း အနီး၌ လက်လုပ်မိုင်း တစ်လုံး ပေါက်ကွဲ
ပါမောက္ခချုပ်နေရာမှ ပြောင်းရွှေ့ပေးရန် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခံရသည့် ပြည်တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်ကို တာဝ?
မလေးရှား ဝန်ကြီးချုပ် အသစ် မဟာသီယာ မေ ၁ဝ ရက်တွင် ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုရန်ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းအား မည်??
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပြည်သူတို့ အမြင်